Nhau - Mafuta Akanyudzwa Transformer uye Dry Transformer
Mafuta Akanyudzwa Transformer uye Dry Transformer
1. Ndeipi nzvimbo yekushandiswa kwemagetsi munzvimbo dzezvitoro? Ndezvipi zvigadzirwa zvatinoda?
1) Mamiriro azvino ekushandiswa kwemagetsi munzvimbo dzekutengesa: kuderera kwesimba rekupa magetsi uye nzira yekufambisa munzvimbo dzekutengesa; kuderera kwekushanda kwevashanduri munzvimbo dzekutengesa: kuderera kwekushandiswa kwevashanduri munzvimbo dzekutengesa, inenge isina-mutoro wekushanda kwevashanduri usiku, zvichiita kuti kurasikirwa kukuru kwevashanduri uye kushanduka kwemagetsi.
2) Kurasikirwa kwemagetsi emagetsi munzvimbo dzekutengesa kwakakura: kune akawanda emagetsi emagetsi, akawanda matavi emagetsi emagetsi emagetsi, simba refu, kurasikirwa kukuru uye kurasikirwa kwemutsara wekupokana nekupisa muzvitoro zvekutengesa, izvo zvinotungamira mukuwedzera kwemagetsi emagetsi uye. kuderera kuri pachena kwekushanda kwesimba, uye kune dzimwe njodzi dzinogona kuitika.
3) Hunhu husina kunaka hwesimba munzvimbo dzekutenga: mitsara yemhirizhonga muzvitoro, simba rakasanganiswa uye magetsi ekuvhenekesa, zvimwe zvemagetsi zvemagetsi, midziyo yemagetsi, isiri-mutsara uye inomhanyisa midziyo yemagetsi, zvichikonzera kuwanda kwemvura inobatana, inoumba kusvibiswa kwemagetsi. simba rehutano mumagetsi emagetsi uye rinopedza huwandu hwakawanda hwemagetsi;
4) Kuraswa kwesimba remagetsi emidziyo yemagetsi muzvitoro zvakakomba, michina yekuvhenekesa yakawanda inotakura mutoro, uye kune yakawanda reactive simba kurasikirwa; imwe-phase simba rekupa, kune yakakomba-nhatu-chikamu kusaenzana mumutsara, zvichikonzera yakawandisa zero-kutevedzana ikozvino uye kuwedzera simba kurasikirwa;
5) Kushandiswa kwemagetsi ezvimwe zvigadzirwa muzvitoro zvekutengesa: air-conditioning, automatic escalators, firiji, nezvimwewo, ine imwe dhigirii yekusatakura, iyo inoguma nekurasikirwa kwesimba remagetsi;
Kupfupisa: Yedu epoxy resin inokanda yakaoma-mhando transformer
SCB10-SCB11 transformer inokodzera kugadzirisa matambudziko ari pamusoro.
Mari-performance ratio: Indasitiri, yekurima uye dzimwe nzvimbo ichateerera kune mutengo-kuita reshiyo yevashanduri, senge mafekitori, nzvimbo dzekuvaka, nzvimbo dzekumaruwa, kurima; zvakanyanya kufanirwa nemafuta-akanyudzwa transformers. On-Load Voltage Regulating Transformer
Zvido zvezvakatipoteredza: mutsauko wekushisa, kusvibiswa kwechipiri, chiyero chekudzivirira, chiyero chekurasikirwa, vashandi-yakanyanya, kugadzirisa kwakanaka, zvinodiwa zvakanyanya kwezvakatipoteredza; zvakanyanya kukodzera kune yakaoma-mhando transformers.